ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သားကြီး ဦးအောင်ဆန်းဦး အကြောင်း - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ပြည်တွင်းသတင်း / ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သားကြီး ဦးအောင်ဆန်းဦး အကြောင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သားကြီး ဦးအောင်ဆန်းဦး အကြောင်း
Apann Pyay 10:47 AM ဗဟုသုတအစုံ , ပြည်တွင်းသတင်း Edit
ဗိုလ်ချုပ်က သားသမီးတွေကို တနှစ်တယောက်မွေးတာ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အထက်မှာ ဦးအောင်ဆန်းလင်း (ရေနစ်သေသွားရှာတယ်) ၊ သူ့အထက် အကိုအကြီးဆုံး ဦးအောင်ဆန်းဦး ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အထက်/အောက် ညီမလေးက မွေးပြီးပြီးချင်း ဆုံးခဲ့ရတယ် ။ ဗိုလ်ချုပ်ခမျာ သမီးငယ်လေးအတွက် မျက်ရည်ကိုချုပ်လို့ နိုင်ငံ့အရေးအတွက် အစည်းအဝေးတက်ခဲ့ရရှာတယ် ။
ဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကွယ်လွန်ချိန် ဦးအောင်ဆန်းဦး (၄)နှစ်/(၅)နှစ်သား လောက်ပဲရှိသေး ။ ဗိုလ်ချုပ်သားအကြီးဆုံး ၊ ရန်သူတွေဝိုင်းနေတာ ၊ အာရှကြယ်ပွင့်ကြီး မျိုးဆက်တော့ အပြတ်မခံနိုင် ဘူးဟဲ့ ဆိုပြီး တောင်အာရှ (အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ်) မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လော့ဒ်မောင့်ဘက်တန် – ( မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးအတွက် အောင်ဆန်းကိုယုံကြည်စွာ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့ ပါလီမန်နဲ့ နန်းရင်းဝန်အက်တလီကို တိုက်တွန်းခဲ့သူ) အဲဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ဦးအောင်ဆန်းဦးကို အပြီးအပိုင် မွေးစားခဲ့တာ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက်အရင် အင်္ဂလန်ကိုရောက်တာ ၊ နောက် မောင့်ဘက်တန်ထောက်ခံချက် ၊ သူ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းဆောင်ချက်နဲ့ အမေရိကန် မရိန်းတပ် ဗိုလ်မှုးအဆင့်ထိ ဖြစ်ခဲ့တာ အဲဒါ(၁၉၈၈)မှာ ဖြစ်နေပြီ ။ လူပျိုပေါက်ဘ၀ လော့ဒ် တစ်ယောက်ရဲ့မွေးစားသား ၊ လူလားမြောက်တော့ အမေရိကန် မရိန်းတပ်ဗိုလ်မှုး ၊ အင်္ဂလန်သူ ၊ အမေရိကန်သူ နာမည်ကျော်မိန်းမချောတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေချိန်မှာ လူပျိုကြီးဂုဏ်ကိုထိန်းလို့ မျိုးနွယ် စောင့်ခဲ့ရှာတယ် ။
ဒီအချိန် – သူ့ညီမ အင်္ဂလန်သားနဲ့ မျိုးနွယ်တိုက်ပွဲကျသွားပြီ ၊ ဗိုလ်ချုပ်မြေးတွေ ကပြားဖြစ်ရပြီဆိုတဲ့ အချိန်မှာ သူနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်တဲ့ သူ့ငယ်သူငယ်ချင်းတွေက အင်္ဂလိပ်စာပြဆရာမ ၊ မန္တလေး “ဖဆပလ”အမတ်ရဲ့သမီး မြန်မာအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ တွေ့ပေးခဲ့တယ် ။ သူက အာဏာတွေ ၊ ရေရှည်အမွေတွေ ဘာမှတွေးတာမဟုတ်ဘူး ၊ ရိုးရိုးလေးပဲ အဖေ့ချွေးမ မြန်မာဖြစ်ရမယ် – ဒီအတွေးနဲ့ သူတို့လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ် ။
အခု အငြိမ်းစား အမေရိကန်ရေတပ် ဗိုလ်မှုးကြီးဘ၀နဲ့ ဘယ်မှာ နေတယ်ထင်သလဲ ။ ကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်း ရန်ကုန်လဲ သူမရွေးခဲ့ ၊ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း နေပြည်တော်လဲ သူခြေမချခဲ့ ၊ မြန်မာတို့ရဲ့အစ မဟာပုဂံက ရွာလေးတရွာမှာ သူ့အဖေစကားအတိုင်း ရိုးသားစွာ ခြံစိုက်စားနေလေရဲ့ ။သူကကော နိုင်ငံရေးစိတ်မဝင်စားလို့လား ???သူကကော ပညာမတတ်လို့လား ???သမိုင်းဆိုတာ သက္ကရာဇ် မှတ်တမ်းတွေနဲ့ ရဲဝံ့သူတို့ဆီက သက်သေတည်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကို သိထားစေချင်တာတစ်ခုက နတ်မောက်သား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသမိုင်း မရိုင်းရလေအောင် သားကြီးဖြစ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦးဟာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ဘဝကို ရပ်တည်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ ။
( အညတြကပ္ပိယ )
ဗိုလျခြုပျက သားသမီးတှကေို တနှဈတယောကျမှေးတာ ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ အထကျမှာ ဦးအောငျဆနျးလငျး (ရနေဈသသှေားရှာတယျ) ၊ သူ့အထကျ အကိုအကွီးဆုံး ဦးအောငျဆနျးဦး ၊ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ အထကျ/အောကျ ညီမလေးက မှေးပွီးပွီးခငျြး ဆုံးခဲ့ရတယျ ။ ဗိုလျခြုပျခမြာ သမီးငယျလေးအတှကျ မကျြရညျကိုခြုပျလို့ နိုငျငံ့အရေးအတှကျ အစညျးအဝေးတကျခဲ့ရရှာတယျ ။
ဒီတော့ ဗိုလျခြုပျကှယျလှနျခြိနျ ဦးအောငျဆနျးဦး (၄)နှဈ/(၅)နှဈသား လောကျပဲရှိသေး ။ ဗိုလျခြုပျသားအကွီးဆုံး ၊ ရနျသူတှဝေိုငျးနတော ၊ အာရှကွယျပှငျ့ကွီး မြိုးဆကျတော့ အပွတျမခံနိုငျ ဘူးဟဲ့ ဆိုပွီး တောငျအာရှ (အငျဒိုခြိုငျးနားကြှနျးဆှယျ) မဟာမိတျတပျပေါငျးစု ဗိုလျခြုပျကွီး လော့ဒျမောငျ့ဘကျတနျ – ( မွနျမာပွညျ လှတျလပျရေးအတှကျ အောငျဆနျးကိုယုံကွညျစှာ လုံးဝလှတျလပျရေးပေးဖို့ ပါလီမနျနဲ့ နနျးရငျးဝနျအကျတလီကို တိုကျတှနျးခဲ့သူ) အဲဒီဗိုလျခြုပျကွီးက ဦးအောငျဆနျးဦးကို အပွီးအပိုငျ မှေးစားခဲ့တာ ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျထကျအရငျ အင်ျဂလနျကိုရောကျတာ ၊ နောကျ မောငျ့ဘကျတနျထောကျခံခကျြ ၊ သူ့ကိုယျပိုငျစှမျးဆောငျခကျြနဲ့ အမရေိကနျ မရိနျးတပျ ဗိုလျမှုးအဆငျ့ထိ ဖွဈခဲ့တာ အဲဒါ(၁၉၈၈)မှာ ဖွဈနပွေီ ။ လူပြိုပေါကျဘဝ လော့ဒျ တဈယောကျရဲ့မှေးစားသား ၊ လူလားမွောကျတော့ အမရေိကနျ မရိနျးတပျဗိုလျမှုး ၊ အင်ျဂလနျသူ ၊ အမရေိကနျသူ နာမညျကြျောမိနျးမခြောတှေ ဝိုငျးဝိုငျးလညျနခြေိနျမှာ လူပြိုကွီးဂုဏျကိုထိနျးလို့ မြိုးနှယျ စောငျ့ခဲ့ရှာတယျ ။
ဒီအခြိနျ – သူ့ညီမ အင်ျဂလနျသားနဲ့ မြိုးနှယျတိုကျပှဲကသြှားပွီ ၊ ဗိုလျခြုပျမွေးတှေ ကပွားဖွဈရပွီဆိုတဲ့ အခြိနျမှာ သူနဲ့ အဆကျအသှယျမပွတျတဲ့ သူ့ငယျသူငယျခငျြးတှကေ အင်ျဂလိပျစာပွဆရာမ ၊ မန်တလေး “ဖဆပလ”အမတျရဲ့သမီး မွနျမာအမြိုးသမီးတယောကျနဲ့ တှပေ့ေးခဲ့တယျ ။ သူက အာဏာတှေ ၊ ရရှေညျအမှတှေေ ဘာမှတှေးတာမဟုတျဘူး ၊ ရိုးရိုးလေးပဲ အဖခြေှ့ေးမ မွနျမာဖွဈရမယျ – ဒီအတှေးနဲ့ သူတို့လကျထပျခဲ့ကွတယျ ။
အခု အငွိမျးစား အမရေိကနျရတေပျ ဗိုလျမှုးကွီးဘဝနဲ့ ဘယျမှာ နတေယျထငျသလဲ ။ ကွီးပှားရာကွီးပှားကွောငျး ရနျကုနျလဲ သူမရှေးခဲ့ ၊ တိုးတကျရာတိုးတကျကွောငျး နပွေညျတျောလဲ သူခွမေခခြဲ့ ၊ မွနျမာတို့ရဲ့အစ မဟာပုဂံက ရှာလေးတရှာမှာ သူ့အဖစေကားအတိုငျး ရိုးသားစှာ ခွံစိုကျစားနလေရေဲ့ ။သူကကော နိုငျငံရေးစိတျမဝငျစားလို့လား ???သူကကော ပညာမတတျလို့လား ???သမိုငျးဆိုတာ သက်ကရာဇျ မှတျတမျးတှနေဲ့ ရဲဝံ့သူတို့ဆီက သကျသတေညျပါတယျ။မိတျဆှတေို့ကို သိထားစခေငျြတာတဈခုက နတျမောကျသား ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးသမိုငျး မရိုငျးရလအေောငျ သားကွီးဖွဈသူ ဦးအောငျဆနျးဦးဟာ နာမညျတဈလုံးနဲ့ ဘဝကို ရပျတညျနတေယျ ဆိုတာပါပဲ ။
( အညတွကပ်ပိယ )